Meheradaha cusub ee "Kaararka" ayaa halkan yaal! | Martech Zone
Axad, Agoosto 10, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markii aan dhajiyay wax ku saabsan iibsashada qaar kaararka ganacsiga cusub, Qaar baan helay weyn talooyinka. Waxaa ka mid ahaa kaararka ganacsiga birta ah iyo xitaa a kaarka ganacsiga adoo adeegsanaya Wordle.
Waxaan go'aansaday inaan aado jiho gebi ahaanba ka soo horjeeda kaarkayga asalka ah. Marka dadwaynuhu maalmahan ii dhiibaan kaarkooda ganacsi, muddo dheer ma haysto - guriga ayaan imid oo waan ku daraa Plaxo iyo LinkedIn ka dibna waan tuurayaa iyaga - iyadoon loo eegin sida ay u qurux badan yihiin. Taasi waxay igu dhiirrigelisay inaan raaco ikhtiyaar cusub:
Aniga oo adeegsanaya raadin deg deg ah, waxaan ka helay shirkad khadka tooska ah ku daabacda caado caadiya oo ah Post-It Note pads oo cabirkeedu yahay kaarka ganacsiga! Waxaan dalbaday farabadan oo iyaga ka mid ah waxayna halkan ku yimaadeen 2 toddobaad gudahood. Kaadhadhku waxay soo baxeen iyagoo qumman, oo gebi ahaanba la jaan qaadaya aaladda internetka ee aan ku isticmaali jiray. Waxaan xushay font ay sahlan tahay in la akhriyo waxaanan ugu talagalay iyaga oo ugu yeeraya cinwaanka URL-ka boggeyga. Xitaa waxaan ku dhiirigelinayaa dadka 'Circle' mowduuc si ay u xusuustaan ​​sababta aan u kulannay ama sababta aan u soo wacay!
Runtii waxaan doonayay wax u gaar ah waxaanan aaminsanahay inay kuwani ku habboon yihiin biilka. Maxay kula tahay
Tags: wacyigasawirosawiro kayd ah oo aan boqortooyo lahaynganacsiga bulshadagobolka suuq-geynta bulshadaphotos stock
Agoosto 10, 2008 saacaddu markay ahayd 12:51 PM
Ma ii sheegi kartaa halkaad ka heshay kuwaa? Anigu waxaan u baahanahay kaararka cusub aniga lafteyda waxaanan jecelahay inaan baaro doorashadan. Waxaan ku noolahay Atlanta mana haysto kaarar isku mid ah, laakiin wax sidan oo kale ah ayaa noqon kara mid aad u qabow. Waan ku faraxsanahay fikradda aan markii hore soo jeediyay.
Agoosto 10, 2008 saacaddu markay ahayd 2:21 PM
Waxaan raadinayay kaararka cusub aniga lafteyda. Tani waxay umuuqataa fikrad weyn. Ma weydiin karaa barta aad ka amartay?
Agoosto 10, 2008 saacaddu markay ahayd 2:27 PM
Runtii waan jeclahay kaararka! Waxaan isla fikrad ahaan lahaa dhawaan inaan goobaabin ka hooseeyo xulashada. Waa inaad si joogto ah ula socotaa sida ay u shaqeeyaan!
Agoosto 10, 2008 saacaddu markay ahayd 3:16 PM
Waad ku mahadsantahay mahadcelinta, waxaan ku dalbaday iyaga oo maraya iPrint.com.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka takhalusto kaararka ganacsiga gebi ahaanba waa inaad isku daydaa http://mydropcard.com Qalab cusub oo cusub oo kuu oggolaanaya inaad adeegsato SMS ama shabakad internet oo moobil ah si aad ugu dirto kaararkaaga dadka aad la kulanto.
Agoosto 11, 2008 saacaddu markay ahayd 7:05 PM
Jacaylka 'em. Kaararka ganacsiga waa "kaararka ganacsiga". Waa inay sheegaan alaabadaada / adeegyadaada. Jaale OOhweee. Kaararkaasi waa hubaal inay muuqdaan. Taasi waa waxa aad ugu yeerto “suuqgeyn”
Hadda taasi waa naqshad qabow.
Waxaan u maleynayaa inaad taas ku isticmaali kartid kaarka ganacsiga ee dhabta ah oo aad uga sii fiicnaan karto adoo adeegsanaya labada dhinacba. Dhinac waxaad ku leedahay madax-xanuun (sidaa darteed waxay xusuustaan ​​sidaad u eg tahay), faahfaahintaada iyo marti-qaad si aad uga hesho [wax] bilaash ah bartaada, ka dibna ku hayso liiska (wareegga) dhinaca kale.
Nov 7, 2008 at 1: 21 AM
Doug… waa maxay fikrad fiican! Isku imaatinkii TechCom ee ugu dambeeyay waxaan ku wareejiyay macluumaadkeyga xiriirka ee ku yaal dhabarka cabitaanka khamriga ka dib Starbucks isticmaalkiisa marka macaamiisha ay keenaan koobkooda. Waxaan weydiistay in yar oo iyaga ka mid ah si aan u calaamadeeyo cabitaanadayda, laakiin waan dhaawacay anigoo u isticmaalaya macluumaadka xiriirka. Waxaa laga yaabaa inaan u maro wadadaada xigta!
Nov 7, 2008 saacadu markay tahay 8:33 PM
Mahadsanid Tony! Waxay ahayd quruxsan la awoodi karo.